आयोगको परीक्षामा फेल प्रअको गुनासो : ‘आयोगले मेरो जिन्दगी बदनाम गरायो’ | नुवागी
ज्ञानकाजी महर्जन, प्रधानाध्यापक, शान्ति निकुञ्ज मावि, काठमाडौँ
म शिक्षा पेशामा लागेको वि.स २०४९ सालबाट हो । सो स्कुलमा म २०५१ सालबाट कोटामा बसेको थिएँ । ६० सालको आयोगको परीक्षामा लिखित परीक्षामा पास भएँ, तर अन्तर्वार्तामा फालिएँ । अहिलेको परीक्षा दिएकोमा पनि म आफैंले हिसाब गर्दा पनि ४० नम्बर त कटेकै छ ।
म आयोगको परीक्षामा पास हुन्छु भनेर २०० प्रतिशत ढुक्क थिएँ । मेरो नतिजा आउनु २ दिन अघिसम्म म पास हुन्छु भन्ने थियो । तर, परीक्षाको नतिजा हेर्दै गएपछि छक्कै परेँ । यसो हेरेँ, धेरै फेल रहेछ । के हो यो? परीक्षा भनेको त पास गर्नको लागि लिइन्छ भने आयोगले फेल गराउनको लागि परीक्षा लिएको मैले महशुस गरेँ । यो नतिजा नियतवश गरिएको हो ।
सहायक प्रधानाध्यापक हुने बित्तिकै स्कुल राम्रो बनाउन योजना बनाएर काम गरेँ र १० वर्षपछि वि.स २०६६ सालमा मलाई नै व्यवस्थापन समितिले प्र.अ को रुपमा चुन्यो । म अस्थायी शिक्षक भएकोले सुरुमा त प्र.अ बन्न स्वीकार गरिनँ तर पछि व्यवस्थापन समितिले अस्थायी भएपनि तपाईंलाई प्रअ बनाउने भनेपछि मैले नाईं भनिनँ ।
काठमाडौँका स्कुलहरुमा सुरुमा स्कुलभित्रै कोचिङ सञ्चालन गराउने स्कुल हाम्रै हो । ५२ सालमा कोचिङ पढाउन शिक्षक अभाव थियो । गणित मैले पढाएँ र अरु नेपाली र विज्ञान पढाउन अन्य क्याम्पसबाट शिक्षक ल्यायौं । र, विद्यार्थीको पढाइस्तर सुधार्यांै ।
म गणित विषय पढाउँछु । गणित विषयमा एसईईमा सबै पास गराएको छु । तर आयोगले मलाई परीक्षामा फेल गराए ।
मलाई परीक्षामा फेल भएको दुःख लागेन । तर आयोगले फेलै गर्ने भए किन परीक्षा लियो? मेरो जिन्दगी मैले त्यो स्कुलमा दिइसकेँ । स्कुलले निकालेर मलाई दुःख छैन । तर आयोगले परीक्षा लिएर फेल गरेर मेरो जिन्दगी बदनाम गरायो । बुद्धिजीवीजस्तो मान्छेलाई बद्नाम गर्ने? मेरो ४० नम्बर कसरी आउँदैन ? गणितमा कसरी आउँदैन। सबै प्रश्न गरेकै छु । पढाइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मैले तथ्याङ्क शास्त्रमा स्नातकोत्तर पहिलो डिभिजनमा पास भएको थिएँ ।
म फेल भए ठिक छ, ल , मेरो कपि देखाउनुस् । कसरी कपि जाचिएको छ? म हेर्न चाहन्छु ।
पैसामात्र कमाउने हो भने मेरो तलबबाट भन्दा ट्युसन पढाएर धेरै पैसा कमाउन सक्थँे । हिजो म त्यो स्कुलमा जाँदा स्कुलको अवस्था एकदम नाजुक थियो । विद्यार्थी संख्या न्यून थियो । शिक्षकहरु आपूm त्यो स्कुलमा पढाउँछु भन्न लाज मान्थे । आजको यो स्कुलको सफलतामा मेरो ठूलो भुमिका रहेको छ । हाम्रो स्कुल स्रोतकेन्द्रकै राम्रो स्कुल बनाएँ । आज, म कसरी असक्षम भए?
स्कुललाई आफ्नै मानी जिल्ला शिक्षासँग पनि भmगडा समेत गरेको छु । आजको दिनसम्म प्र.अ हुँदा न कसैलाई घुस खुवाएँ न त कसैसँग लिएँ ।
One thought on "आयोगको परीक्षामा फेल प्रअको गुनासो : ‘आयोगले मेरो जिन्दगी बदनाम गरायो’"
कृष्णलाल श्रेष्ठ says:
यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने मैले टेली स्ृखला हेरेको थिएँ । हाम्रो परिपाटी यस्तै रहेछ , सर हार खानु हुँदैन ।